Tallaabo cusub oo ku aadan ku biirista Cristiano Ronaldo ee kooxda Manchester City… (Maxaa soo kordhay?) – Gool FM
Tallaabo cusub oo ku aadan ku biirista Cristiano Ronaldo ee kooxda Manchester City… (Maxaa soo kordhay?)
Dajiye August 27, 2021
(Turin) 27 Agoosto 2021. Magaca Cristiano Ronaldo ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo Juventus xagaagan, hal xilli ciyaareed kahor inta uusan dhicin qandaraaska uu kula jiro kooxda reer Talyaani.
Shabakada caalamiga ah ee “Goal” ayaa xaqiijisay in Cristiano Ronaldo ka maqnaa tababarkii subaxnimadan ee kooxda Juventus, taasoo xaqiiq ka dhigeysa inuu xagaagan ka tagayo Bianconeri, isla markaana uu ku biiro Manchester City.
Dhankiisa, Saxafiga caanka ah ee Gianluca Di Marzio ayaa wuxuu boggiisa rasmiga ah ku daabacay sawirka imaatinka Ronaldo ee xarunta tababarka Juventus.
Gianluca Di Marzio ayaa sidoo kale soo qoray: “Cristiano ayaa saakay soo galay xarunta tababarka, si uu macsalaameeyo saaxiibadiisa markii ugu dambeysay, una soo gabagabeeyo xirfadiisa kooda Juventus, kaddib markii ciyaaryahanka reer Portugal uu shalay faaruqiyay qaanadiisa dharka ee qolka labiska kooxda.”
Manchester City ayaa loo arkaa inay tahay kooxda ugu cad-cad ee heli karta adeega Cristiano Ronaldo, sidoo kale Paris Saint-Germain ayaa ka mid ah kooxaha lala xiriirinayo saxiixa laacibka reer potugal.
Shabakada “Goal” ayaa waxay intaas ku dartay in Jorge Mendes, oo ah wakiilka Cristiano Ronaldo, uu si joogto ah uga shaqeynayo sidii uu laacibka ugu biiri lahaa kooxda Manchester City kahor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga xagaaga 31 -ka August.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Juventus ay hadda sugayso dalabka rasmiga ah ee kooxda Manchester City si uu ugu biiro Ronaldo, maadaama maamulka marwada duqda ah ay diidan yihiin inay lacag la’aan ku fasaxaan xiddiga reer Portugal.
Real Madrid oo diyaarineysa xaflad weyn si ay u soo dhaweyso heshiiska la sugayo ee Kylian Mbappé
RASMI: Real Madrid oo qandaraaska u kordhisay xiddigeeda reer Brazil ee Casemiro… (Imise sano ayuu saxiixay?)